> Resource> iPod> otú nyefee Music si gam akporo ka iPod
Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ m ike ịnyefe music si m Android Samsung Galaxy Tablet 2 m iPod aka 4G?
The iPod bụ ezigbo music ọkpụkpọ, na nke ị pụrụ ịnụ ụtọ music mgbe ọ bụla na n'ebe ọ bụla o kwere omume. Ọ bụrụ na ị nwere ụyọkọ songs na gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl, i nwere ike chọrọ nyefee ka iPod. Otú ọ dị, n'adịghị Android ngwaọrụ, ị nwere ike kpọmkwem nyefee music ka iPod enweghị enyemaka nke a usoro ihe omume, dị ka iTunes. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ idetuo music si gam akporo ka iPod, ugbu a akwụsị ebe a. Ebe a bụ a bara uru Android ka iPod transfer ngwá ọrụ, na-, Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na-enye gị nyefe niile music na gị Android ngwaọrụ iPod (ọhụrụ akwado iOS9) na 1 Pịa.
Download a gam akporo na iPod transfer ngwá ọrụ na kọmputa. Na akụkụ n'okpuru, Lets 'na-agbalị Windows version. The Mac version na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ.
Cheta na: Wondershare MobileTrans bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọtụtụ puku ndị na gam akporo ngwaọrụ na ọtụtụ iPods. Ebe a, ị nwere ike ịlele niile na-akwado Android ngwaọrụ na iPods.
The akụkụ n'okpuru bụ usoro nke-ebufe music si Android ngwaọrụ iPod. Ahapụ 'gaa ego ya!
Nzọụkwụ 1. Wụnye na-agba ọsọ a gam akporo na iPod transfer ngwá ọrụ
Ihe mbụ ị ga-eme bụ iji wụnye na-agba ọsọ ngwá ọrụ a na kọmputa gị. Mgbe ahụ, bụ isi window-egosi na gị na kọmputa na ihuenyo. Gaa na ekwentị ekwentị Nyefee mode na pịa Malite.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod na gam akporo ngwaọrụ na kọmputa
Ọzọ, jikọọ ma gị Android na ngwaọrụ ma iPod na kọmputa site USB cables. Ngwá ọrụ a ga-chọpụta na ngwaọrụ ozugbo. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na Android ngwaọrụ a gosiri na n'aka ekpe, na iPod egosi elu na nri.
Site na ịpị "tụgharịa", na ị na-ike ịgbanwe ebe nke ngwaọrụ abụọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji wepụ music na gị iPod na-eme ka ụlọ maka songs na gị android ngwaọrụ, ị nwere ike nne Mmetụta oyi "Doro Anya data tupu akwụkwọ.
Nzọụkwụ 3. Paghaa music si gam akporo ka iPod
Dị ka ị na-ahụ na foto dị nzọụkwụ 2, music, kọntaktsị, kalinda, ederede ozi, videos na foto na-enyocha na ike-kpaliri. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ bu n'obi na-akpali music, ị kwesịrị ị na uncheck kọntaktị, videos, kalenda, ozi ederede na photos.
Ugbu a, ihe niile dị njikere. Ahapụ 'mee ka nyefe site na ịpị "amalite Copy". Na usoro, Akwụpụla gị gam akporo ngwaọrụ ma ọ bụ iPod. Mgbe niile music on Android na-agafere ka iPod, ị kwesịrị pịa "OK" na-akwụsị ya.
Ugbu a, na-agbalị MobileTrans nyefee Android music ka iPod na 1 click!
Otú e si etinye Music on iPod nano
Otú nyefee Music si iPod kpochapụwo ka Computer